Dawladda Itoobiya Oo Saami-Qaybsiga Kuraasta Baarlamaanka Ku Xaqirtay Awooda Soomaalidda | Aftahan News
Dawladda Itoobiya Oo Saami-Qaybsiga Kuraasta Baarlamaanka Ku Xaqirtay Awooda Soomaalidda
Addis Ababa, (Aftahannews)-Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa shaaciyay goob doorashooyinka baaralamaanka dowladda dhexe lagu soo galayo golaha shacabka dalkaasi iyo tirada ka imaneysa gobol walba.
Xafiiska guddigaas ee magaalada Addis Ababa ayaa shalay lagu qabtay shirkii lagu shaacinayay goob doorashooyinka sagaalka deegaan iyo labada ismaamul magaalo, waxaana saamiyada gobollada ee la shaaciyey aad loogu bah-dilay Soomaalida.
Shirkan ayaa waxaa goob joog ka ahaa hoggaamiyayaasha xisbiyadda siyaasadeed iyo wakiillo ka socday bulshada rayidka ee Itoobiya.
Sida ka muuqata saamigan, Soomaalida ayaa la siiyey kuraas aad uga yaar baaxadda dhulkooda iyo tirada dadkooda, iyada oo gobolka Soomaalida uu yahay kan labaad ee ugu baaxadda weyn, halka tiro ahaan la sheego qowmiyadda saddexaad ee ugu badan.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Itoobiya, Burtukan Mideqsa, oo goobta ka hadashay ayaa waxay sheegtay in goob doorashooyinka ay soo bandhigeen ay yihiin kuwii hore oo aanay waxba ka brdelin.